China ụzọ embossing igwe rụpụta na Factory | Ekechukwu
Main cylinder ike
Ọnụ ụzọ na usoro
Anyị nwere ike ịnye usoro dị iche iche maka ndị ahịa ịhọrọ, anyị nwere ike inye ebu. The ebu ga-anwale na anyị factory.
The ebu nwere 1 set nke ebu etiti na otutu tent nke ebu cores, ahịa nwere ike ime ka dị iche iche ụkpụrụ, na na mkpa ịzụta 1 set nke ebu eku.
Sistemụ Njikwa Ọdụdọ
1. Usoro eletriki nwere akara eletrik na okirikiri nchịkwa. Ogwe ike bụ 380V, 50HZ, nke na-ahụ maka ịmalite, ịkwụsị na ichebe igwe mgbapụta mmanụ. Sistemụ njikwa na-ejikwa ihe njikwa PLC jikọtara ya na njikwa ihuenyo mmetụ iji ghọta usoro ihe omume dị iche iche nke akụrụngwa igwe.
2. A na-etinye ihe ndị bụ isi na-ekesa ihe nchịkwa na isi nchịkwa nchịkwa, na-etinye kabinet isi akara na ala n'akụkụ aka nri nke fuselage; akụrụngwa na-arụ ọrụ akụrụngwa jikọtara ya na wires ndị dị nro, isi ụlọ ọrụ ndị isi na-adịkarị mgbe niile, a na-ejikọkwa akara akara site na nkwụnye ụgbọelu maka ikpochapu ngwa ngwa Na nhazigharị.
3. A na-ewere isi ọrụ nke akụkụ njikwa site na "PLC" programicable logic njikwa. Dịka mkpa nke usoro ahụ, iwu ndị isi nchịkwa nchịkwa (nhọrọ ngbanwe, bọtịnụ, wdg) nyere, dabere na akara akara site na ihe nchọpụta dịka ihe mmetụta mwepụ, ihe ngbanwe njem, ihe mmetụta mgbali, wdg, usoro. ngbanwe na ụkpụrụ analog nke igwe na draịva Hydraulic pilot valve na ngwaọrụ ndị ọzọ na-achọpụta njikwa nke nrụgide na mwepụ nke hydraulic actuator-cylinder, wee mezue usoro mmepụta nke igwe.
Ihe mgbochi nke ihe mmịfe ahụ na-achịkwa ihe mmetụta mgbapụ zuru oke. A na-ahazi ihe mgbapụta na-ewepụ akụkụ nke elu nke dị n'ime kọlụm ahụ. Enwere ike ịtọ strok na ọnọdụ ntụgharị ọnọdụ ozugbo ma gosipụta ya na ihuenyo mmetụ. Na mgbakwunye, enwere ikike mgbago elu na nke ala maka nchebe abụọ na ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya.
4. A na-ahazi ogwe aka na-arụ ọrụ nke akụrụngwa na isi nchịkwa nchịkwa, na ihuenyo ngosipụta ngosipụta ngosipụta ngosipụta, ọrụ ọkwa ọkwa ọkụ na bọtịnụ ọrụ dị mkpa na nhọpụta nhọrọ na-ahazi na panel ahụ. ma na-achịkwa okirikiri. Ogwe ike bụ 380V, 50HZ, nke na-ahụ maka ịmalite, ịkwụsị na ichebe igwe mgbapụta mmanụ. Sistemụ njikwa na-ejikwa ihe njikwa PLC jikọtara ya na njikwa ihuenyo mmetụ iji ghọta usoro ihe omume dị iche iche nke akụrụngwa igwe.
A na-etinye isi ihe ndị na-achịkwa nkesa ike na isi nchịkwa nchịkwa, na-etinye kabinet isi akara na ala n'akụkụ aka nri nke fuselage; akụrụngwa na-arụ ọrụ akụrụngwa jikọtara ya na wires ndị dị nro, isi ụlọ ọrụ ndị isi na-adịkarị mgbe niile, a na-ejikọkwa akara akara site na nkwụnye ụgbọelu maka ikpochapu ngwa ngwa Na nhazigharị.
5. A na-ewere isi ọrụ nke akụkụ njikwa site na "PLC" programmable logic njikwa. Dịka mkpa nke usoro ahụ, iwu ndị isi nchịkwa nchịkwa (nhọrọ ngbanwe, bọtịnụ, wdg) nyere, dabere na akara akara site na ihe nchọpụta dịka ihe mmetụta mwepụ, ihe ngbanwe njem, ihe mmetụta mgbali, wdg, usoro. ngbanwe na ụkpụrụ analog nke igwe na draịva Hydraulic pilot valve na ngwaọrụ ndị ọzọ na-achọpụta njikwa nke nrụgide na mwepụ nke hydraulic actuator-cylinder, wee mezue usoro mmepụta nke igwe.
6. The centralized ọrụ akara panel nke akụrụngwa na-ndokwa na isi akara kabinet, na aka obubọk ulo oru ngosi ihuenyo, na-arụ ọrụ ọnọdụ egosi ìhè na mkpa ọrụ bọtịnụ na nhọrọ switches na-ndokwa na panel.
1. Mmanụ tank e setịpụrụ na-amanye jụrụ nzacha usoro (ulo oru efere-ụdị mmiri jụrụ ngwaọrụ, obi jụrụ site igbasa mmiri, mmanụ okpomọkụ≤55℃，Gbaa mbọ hụ na igwe nwere ike ịpịgide aka na awa 24.
2. Thelọ ọrụ hydraulic na-agbaso usoro njikwa njikwa katrij na ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na nnyefe nnyefe dị elu.
3. A na-akwadebe tank mmanụ ahụ na nzacha ikuku iji kpọtụrụ ya n'èzí iji hụ na emetọghị mmanụ hydraulic.
4. Njikọ dị n'etiti valvụ na-ejuputa na tank mmanụ na-eji nkwonkwo na-agbanwe agbanwe iji gbochie vibration ka a na-ebute ya na tank mmanụ ma dozie nsogbu nke nkwụsị mmanụ.
Nka na ụzụ Motion
1. Enwere ike ịrụ ọrụ igwe akụrụngwa na ụdị 4: mmezi (Inching), akwụkwọ ntuziaka, ọkara akụrụngwa na akpaghị aka, a ga-ekekwa usoro ọrụ n'ime ụzọ 2: ịmechi anya-anya na nrụgide nrụgide
2. antnọgide-anya mode: Mgbe ọnọdụ slide na kwushin dị ugbu a ruru n'ọnọdụ atọrọ, a na-akwụsị ọrụ ugbu a. Uru ịdị adị nke slides na-adị mgbe niile dị n'ime nso slide zuru oke.
3. -nọgide-nrụgide mode: Mgbe nrụgide dị ugbu a nke slide na kwushin ruru nrụgide atọrọ, a na-akwụsị ọrụ ugbu a.
4. Ndozi (inching): Arụ ọrụ kwekọrọ ekwekọ mkpọchi mezue kwekọrọ ekwekọ omume. Ingpị bọtịnụ maka otu oge na-eme ka igwe igwe pịa zuru ezu oge. A na-akwụsị igwe pịa mgbe bọtịnụ wepụtara. A na-ejikarị ọnọdụ a edozi igwe ntanetị ma dochie ọnwu.
5. Akwụkwọ ntuziaka: Pịgharịa bọtịnụ ọrụ ọ bụla iji mezue mmemme dabara na ya, ntinye ọ bụla mezue 1 oge.
6. Ọkara akpaaka: Ugboro abụọ aka button iji mezue otu okirikiri: Mgbe a abụọ-n'aka button na-enwe, pịa igwe enwezu a set nke usoro omume (okirikiri usoro a ga-preset)
Eldgbado ọkụ nkọwapụta nke Isi Isi
A-n'akụkụ H = T2 / 3
B-n'akụkụ H = T1 / 3
A-n'akụkụ 60 Celsius
B-n'akụkụ 35 Celsius
okpukpu abụọ kwadoro-weld mbụ wee laghachi-weld, ikpeazụ ịchọ mma-Weld
Dabere na Drawing
abụọ kwadoro tak-Weld mbụ mgbe azụ-Weld, mgbe ịchọ mma-Weld chebe okpomọkụ
A-n'akụkụ H = T / 2
B-n'akụkụ H = T / 3
Mpempe akwụkwọ V-H = T / 3
Ugboro abụọ-V uzo
H = N / 3
-Dị Vroog H = T / 3
T-udi nhazi dị ka n'elu, sloping efere ịgbado ọkụ mgbe T-udi okokụre
Mpempe akwụkwọ V-H = T2 / 3
tak-weld mbụ wee laghachi-weld, ikpeazụ ịchọ mma-Weld
Isiokwu Ndidi Of Structure
Symmetry of External Elements of Fuselage Nhazi（Ohere ndidi . B）
Fuselage Ọdịdị akụkụ anọ（diagonal L ndidi . L.）